Amụma nzuzo a na-achịkwa ụzọ Fyrebox Quizzes si anakọta, ojiji, na-ekwusi ike ma gosipụta ozi anakọtara site n'aka ndị ọrụ (nke ọ bụla, "Onye ọrụ") nke weebụsaịtị https://www.fyrebox.com ("Site"). Amụma nzuzo a gbasara saịtị ma ngwaahịa na ọrụ niile Fyrebox Quizzes na-enye
Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ site n'ọtụtụ ụzọ, gụnyere, mana enweghị ya, na mgbe Ndị ọrụ bịara na saịtị anyị, debanye aha na saịtị ahụ, tinye iwu, yana n'ihe metụtara ọrụ, ọrụ, atụmatụ ma ọ bụ akụ ndị anyị na-eme. dị na saịtị anyị. Enwere ike ịrịọ ndị ọrụ maka, dịka okwesiri, aha, adresị email, ozi kaadị akwụmụgwọ. Ndị ọrụ nwere ike, na -e nwere ike ịga na saịtị anyị na-amaghị ama. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha ejiri aka ha nyefee anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike ịjụ ịnye ozi njirimara nke onwe ha, ewezuga na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ọrụ ụfọdụ metụtara saịtị.
Ozi njirimara nkeonwe
Anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara onwe gị gbasara ndị ọrụ mgbe ọ bụla ha na saịtị anyị nwere mmekọrịta. Ozi njirimara na-abụghị nke onwe ya nwere ike ịgụnye aha ihe nchọgharị, ụdị kọmputa na ozi teknụzụ gbasara ndị ọrụ iji jikọta saịtị anyị, dị ka sistemụ arụmọrụ na ndị na-enye ọrụ ntanetị tinye na ozi ndị ọzọ yiri ya.
Saịtị anyị nwere ike iji "kuki" bulie ahụmịhe Onye ọrụ. Ihe nchọgharị weebụ nke onye ọrụ na-etinye kuki na draịvụ ike ha maka ebumnuche idekọ ma mgbe ụfọdụ iji soro ozi gbasara ha. Onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ịtọ ihe nchọgharị weebụ ha iji jụ kuki, ma ọ bụ iji dọ gị aka na ntị mgbe eziga kuki. Ọ bụrụ na ha mee nke a, rịba ama na akụkụ ụfọdụ nke saịtị ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Otu anyị si eji ozi anakọtara
Fyrebox Quizzes nwere ike ịnakọta ma jiri ozi nke ndị ọrụ maka ebumnuche ndị a:
Iji mee ka ọrụ ndị ahịa ka mma
Ozi ị nyere anyị na-enyere anyị aka ịza ajụjụ maka ọrụ ndị ahịa gị yana ịkwado ọrụ nke ọma.
Iji hazie ahụmịhe onye ọrụ
Anyị nwere ike iji ozi dị na mkpokọta anyị mata etu ndị ọrụ anyị dị ka otu si eji ọrụ na akụ ndị enyere na saịtị anyị
Iji mee ka saịtị anyị dị mma
Anyị nwere ike iji nzaghachi ị nyere iji melite ngwaahịa na ọrụ anyị.
Hazie ịkwụ ụgwọ
Anyị nwere ike iji ozi Ndị ọrụ na-enye banyere onwe ha mgbe ị na-etinye iwu naanị ka ha nye ọrụ maka iwu ahụ. Anyị anaghị eso ndị ọzọ nọ n’ozi anyị ekerịta ozi ndị ọzọ ma e wezụga otu esi enye aka n’ọrụ ahụ.
Ka izipu ozi ịntanetị n’oge
Anyị nwere ike iji adreesị ozi-e ziga ozi onye ọrụ na mmelite metụtara usoro ha. O nwekwara ike iji ya zaa ajụjụ, ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Onye ọrụ ga-ekpebi ịbanye na listi nzipu ozi anyị, ha ga-enweta ozi ịntanetị nke nwere ike ịgụnye akụkọ ụlọ ọrụ, mmelite, ngwaahịa metụtara ya ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg. Ọ bụrụ na oge ọ bụla Onye ọrụ ahụ ga-achọ iwepu aha site na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, anyị gụnyere Ndenye aha ịdebanye aha na ala nke email ọ bụla ma ọ bụ Onye ọrụ nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na saịtị anyị.
Otu anyị si kpuchido ozi gị
Anyị na-anakọta mkpokọta data kwesịrị ekwesị, nchekwa na nhazi usoro yana usoro nchebe iji chebe nnweta na-enweghị ikike, mgbanwe, mkpughe ma ọ bụ mbibi nke ozi onwe gị, aha njirimara, paswọọdụ, ozi azụmahịa na data echekwara na saịtị anyị.
Sharingkesa ozi nkeonwe gị
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ ịgbazite ozi njirimara nke ndị ọzọ na ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi igwe mmadụ gbasara ọnụọgụ mmadụ ejikọghị na ozi njirimara ọ bụla gbasara ndị ọbịa na ndị ọrụ anyị na ndị ọrụ azụmahịa anyị, ndị mmekọ tụkwasara obi na ndị mgbasa ozi maka ebumnuche dị n'elu. Anyị nwere ike iji ndị ọzọ na-eweta ọrụ iji nyere anyị aka rụọ ọrụ anyị na saịtị ahụ ma ọ bụ Na-achịkwa ihe omume anyị, dị ka iziga akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ nyocha. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị n'etiti ndị ọzọ maka ebumnuche ndị a akachaghị anya maka na ị nyere anyị ikike gị.
Ndị ọrụ nwere ike ịchọta mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị anyị nke jikọtara saịtị na ọrụ nke ndị mmekọ anyị, ndị na-eweta ngwaahịa, ndị mgbasa ozi, ndị na-enye nkwado, ndị na-enye ikike na ndị ọzọ. Anyị anaghị ejikwa ọdịnaya ma ọ bụ njikọ ndị na-egosi na saịtị ndị a ma anyị anaghị akpata omume maka omume ndị nrụọrụ weebụ jikọtara ma ọ bụ na saịtị anyị. Na mgbakwunye, saịtị ma ọ bụ ọrụ ndị a, gụnyere ọdịnaya ha na njikọ ha, nwere ike na-agbanwe mgbe niile. Saịtị na ọrụ ndị a nwere ike ịnwe amụma nzuzo ha na atumatu ọrụ ndị ahịa. Nchọgharị na mmekorita na weebụsaịtị ọ bụla, gụnyere weebụsaịtị nke nwere njikọ na saịtị anyị, dabere na usoro iwu na ụkpụrụ nke weebụsaịtị ahụ.
Fyrebox Quizzes Ltd nwere ikike imelite amụma nzuzo a n'oge ọ bụla. Mgbe anyị mere, anyị ga-agụgharị ụbọchị emelitere na ala nke ibe a wee zitere gị email. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nyochaa peeji a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla iji nọrọ na-akọ banyere otu anyị si enyere aka ichedo ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Kwenyere ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị ịtụle iwu nzuzo a kwa oge na ịmata mgbanwe.
N nabata usoro ndị a
Site n'iji saịtị a, ị na-egosi nnabata gị nke iwu a yana usoro ọrụ a. Ọ bụrụ n ịnyị ekwenyeghị n'iwu a, biko ejikwala saịtị anyị. Gị n’iji saịtị ahụ na-eso na nzipu nke mgbanwe na iwu a ga-ahụta na ịnabata mgbanwe ndị ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Iwu Nzuzo a, omume nke saịtị a, ma ọ bụ mmekọrịta gị na saịtị a, biko kpọtụrụ anyị na:
Emechara ederede a emelitere ikpeazụ na Machị 9, 2020